Snapdragon 700: အတုထောက်လှမ်းရေးသည်ဈေးအသက်သာဆုံးစမတ်ဖုန်းများသို့ရောက်ရှိသည်
Snapdragon 700: အတုထောက်လှမ်းရေးသည်ဈေးအသက်သာဆုံးစမတ်ဖုန်းများသို့ရောက်ရှိသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပရိုဆက်ဆာအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
MediaTek P60 ကို MWC18 တွင်တရားဝင်ပြသခဲ့သည်
MediaTek P60 ကိုဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်မှစ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကို၎င်း၏ P series များတွင်အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အကျိုးအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာအဖြစ်သေချာစေပြီး၎င်းကိုယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်မှရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူ့ကိုပြောပြကြ၏။
ဤရွေ့ကား Mediatek P60, အန်းဒရွိုက်၏အထက်အလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးကိုရည်ရွယ်လိမ့်မည်ဟုချစ်ပ်၏ filtered ရလဒ်များဖြစ်ကြသည်
ထိုင်ဝမ် Mediatek တွင် 2GHz အမြန်နှုန်းရှိ Core ရှစ်ခုရှိခြင်းကိုမြင့်မားသော Android အလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးတွင်ရည်ရွယ်မည့်ချစ်ပ်အသစ်တစ်ခုပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Mediatek P60 - SoC အကြောင်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာစီလိုနာ၏ Mobile World Congress တွင်တင်ပြရမည်။
Android Go နှင့်အတူပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းများကို MWC 2018 တွင်ပွဲထုတ်မည်
ပထမဆုံး Android Go စမတ်ဖုန်းများ MWC 2018. သို့ရောက်ရှိမည်။ Google သည် operating system ၏အလင်းရောင်ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာခဲ့သည်။
စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်သည် ၁၄ နှစ်ကြာတည်ရှိပြီးနောက်ရောင်းအားကျဆင်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်သီအိုရီအချို့ရှိသည်။
Samsung က Qualcomm မှနောက်ထပ် 5G ပရိုဆက်ဆာများကိုထုတ်လုပ်မည်
Samsung သည် Qualcomm မှလာမည့် 5G ပရိုဆက်ဆာများကိုထုတ်လုပ်မည်။ သူတို့ကစျေးကွက်လွှမ်းမိုးဖို့ရှာသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားသဘောတူညီချက်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
မကြာခင်မှာ Shadowgun Legends သည် Android သို့ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ သင်ယခု Google Play တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်
မကြာခင်မှာ Shadowgun Legends သည် Android သို့ရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ သင်ယခု Google Play တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ လူသိများတဲ့ Saga အသစ်အရစ်ကျရောက်ရှိမှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Android ဖုန်းများကို Google ကအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Android မိုဘိုင်းကို Google ကအတည်ပြုလိမ့်မည် စံပြဖုန်းကိုရှာဖွေရန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်သစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Qualcomm အတုဥာဏ်သည်ယနေ့ပရိုဆက်ဆာများသို့ရောက်ရှိသည်။ ဒီinရိယာ၌ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android P သည်နောက်ခံအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မိုက်ကရိုဖုန်းဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်
Android P သည်နောက်ခံအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မိုက်ကရိုဖုန်းဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူ၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်ရှာဖွေသည့် operating system အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ၄၀ ရာနှုန်းသောဥရောပသားများ၏အချက်အလက်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ၄၀ ရာနှုန်းသောဥရောပသားများ၏အချက်အလက်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီတွင်ရှိသောကြီးမားသည့်အချက်အလက်ပမာဏကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Google Pay - Android Pay ၏သက်တမ်းတိုးခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ပြီဖြစ်သည်
Google Pay - Android Pay ၏သက်တမ်းတိုးခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုရရှိနိုင်သော Android အတွက်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာလျှောက်လွှာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
လူကြိုက်များသော Swype keyboard ကိုအထောက်အပံ့မပြုတော့ပါ
သူ၏ Swype ကီးဘုတ်တီထွင်မှုကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုကြေငြာပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဟန်အမူအရာများကိုစာရိုက်သည့်အခါရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ဆက်လက်အသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရသည်။
Android P သည်နောက်ခံအက်ပလီကေးရှင်းများအားကင်မရာဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်
Android P သည်နောက်ခံအက်ပလီကေးရှင်းများအားကင်မရာဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်။ operating system သို့လာမည့် feature အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android application များ၏ ၆.၆% ကိုပေးချေသည်
Android application များ၏ ၆.၆% ကိုပေးချေသည်။ Play Store တွင်တွေ့ရသည့်အခကြေးငွေပေးရသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Google က Pixel2၏စျေးနှုန်းကို Nexus ပိုင်ရှင်များကိုလျှော့ချသည်
Google က Pixel2၏စျေးနှုန်းကို Nexus ပိုင်ရှင်များကိုလျှော့ချသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကုမ္ပဏီဆောင်ရွက်နေသောဤပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အတည်ပြုပြီးပါပြီ။ Alcatel 5၊ 3V နှင့် 1X တို့ကိုဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
Alcatel မှ၎င်း၏မော်ဒယ်လ် ၃ မျိုးကိုစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာရှိ Mobile World Congress တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Alcatel 5၊ 3V နှင့် 1X အကြောင်းပိုမိုများပြားသောအရာများဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
ဖေ့စ်ဘွတ်ကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွက်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတိုးမြှင့် ဤအလွန်အသုံး ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုသူတို့မိတ်ဆက်မည့်အပြောင်းအလဲများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
M-HORSE စင်ကြယ်သော2ပြန်လည်သုံးသပ်
ကျွန်တော်တို့ဟာစမတ်ဖုန်းရဲ့ဒုတိယဗားရှင်းကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်စေတယ်။ M-HORSE Pure2ကိုလမ်းတိုင်းလိုလိုတွင်တိုးတက်သည်။ ၅.၉၉ လက်မဖန်သားပြင်၊ ကင်မရာနှစ်လုံး၊ 5,99GB RAM နှင့်ပိုမိုသောအရာများ
Google Assistant ကိုနိုင်ငံများစွာနှင့်ဘာသာစကားများကို ၂၀၁၈ တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသစ်တွင်စျေးကွက်အသစ်များတွင် virtual assistant စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရောင်းခဲ့သောphonesရာမစမတ်ဖုန်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်း ၁,၄၅၇.၅ သန်းရောင်းချခဲ့ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချခဲ့သောစမတ်ဖုန်းအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
6GB RAM Nokia 2017 (4) ကိုအိန္ဒိယတွင်နောက်ဆုံးတွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်
6GB RAM နှင့် 2017GB Internal Storage ပါရှိသည့် Nokia4(64) ကိုကျော်ကြားသောအွန်လိုင်းစတိုး FlipKart မှတစ်ဆင့်အိန္ဒိယတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်မှ ၁၆,၉၉၉ ရူပီးနှင့် ၂၁၃ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Google သည် Pixel ဖုန်းများထက် ၂ ဆရောင်းချခဲ့သည်
Google Pixel ၏ရောင်းအားသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်နှစ်ဆရှိခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်ဖုန်းများ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ရောင်းအားတိုးလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဒီနေ့ Valentine's Day မှာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သူမပါဘဲပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးရဲရင့်ဆုံးနဲ့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဂိမ်း ၁၀ ခုကိုယူဆောင်လာပါပြီ။
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်း Nokia သည် OnePlus, HTC သို့မဟုတ် Sony ထက်ဖုန်းများပိုမိုရောင်းချခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်က Nokia သည် HTC နှင့် Sony ထက်ကျော်လွန်ပြီးရောင်းအားကျဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အများအပြားထက်သာလွန်သောကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Gmail Go: Gmail ၏အလင်းမူကွဲသည် Google Play သို့ရောက်ရှိသည်
Gmail Go ကို Google Play တွင်တရားဝင်ရောက်သည်။ Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်ပေါ့ပါးသည့်ဂျီမေးလ်ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Snapdragon 845 သည်အခြားပရိုဆက်ဆာများကိုစွမ်းအားဖြင့်သာလွန်သည်
Snapdragon 845 သည်အခြားပရိုဆက်ဆာများထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်။ ပရိုဆက်ဆာသည်၎င်း၏စွမ်းအားကိုမြင်ရန်မည်သို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Motorola Moto E5 Play ဒီဇိုင်းကိုစစ်ထုတ်သည်
Moto E5 Play - အနိမ့်ဆုံး Motorola ၏ဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Aprilပြီလတွင်ရောက်ရှိလာမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ကျသောဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android Auto ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ယခုမော်တော်ယာဉ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်။
စပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် Mobile World Congress မှရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Xiaomi Mi Mix 2S သည်ဆွေးနွေးစရာတစ်ခုခုပေးခဲ့သည်။ Snapdragon 845, 8GB of RAM နှင့် screen အောက်ရှိ fingerprint reader တို့ဖြင့်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟုအတည်ပြုသည့်အနေဖြင့်မကြာသေးမီကအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + နှင့် Note5တို့သည် Android Oreo ကိုရရှိနိုင်သည်
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + နှင့် Note5တို့သည် Android Oreo ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများသို့ရောက်ရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Snapdragon 670: အလယ်အလတ်တန်းစားပရိုဆက်ဆာအသစ်
Snapdragon 670: Mid-range processor အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ Qualcomm ၏ mid-range processor အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ယိုစိမ့်မှုအရ၎င်းတို့သည် Xiaomi Mi7၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်
မကြာသေးမီက Xiaomi Mi7သယ်ဆောင်နိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ ယခုနှစ်တွင်အလင်းမြင်ရမည့်အာရှကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ဆိပ်ကမ်း၊ စပိန်၊ ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် MWC တွင်၊ ပေါက်ကြားခဲ့ကြပြီ။
Huawei Mate 10 Pro သည်အလွန်အမင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်
Huawei Mate 10 Pro သည်ပြင်းထန်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင်ပြသသည်။
Honor 8 and 7X သည် Android 8.0 Oreo ကိုရလိမ့်မည် ... နွေရာသီမတိုင်မီတွင်ဖြစ်သည်။
Huawei Honor 8 နှင့် 7X တို့သည်နွေရာသီမကုန်မီ EMUI 8.0 လက်အောက်တွင် Android 8 Oreo ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟု Honor France မှပြောကြားခဲ့သည်။ Honor India သည်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုယခင်ကပြောကြားခဲ့သည့်အတွက်ဤသည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Elephone သည်စပိန်နိုင်ငံသို့ Elephone U နှင့် U Pro နှင့်အတူရောက်ရှိသည်
Elephone U နှင့် U Pro တို့ဖြင့်စပိန်နိုင်ငံသို့ဆင်းသက်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်၎င်း၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google Drive သည် Office, PDF နှင့်ပုံများတွင်ဖန်တီးထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်
Google Drive မှထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ Office စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့် PDF ဖိုင်များသို့မှတ်ချက်များထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
Kodi 18 သည် Google Assistant နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
လက်ရှိ beta တွင်ရှိနေသော Kodi ၏နောက်ထပ်မူကွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Google Assistant Google Assistant နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေပါလိမ့်မည်
vkworld S8 ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်ဤစမတ်ဖုန်းသည် Samsung Galaxy S8 ၏အခြားကိုယ်ပွားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ Samsung ဖုန်းရဲ့အမြင့်မှာရှိလား။ ကျနော်တို့ကဒီကမ်းလှမ်းမှုအများကြီးနှင့်အတူဤတရုတ် terminal ကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုပြောပြပါ။
Turing, Turing ဖုန်းကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံရန်ဖိုင်များ။ ဖုန်းကိုစျေးကွက်ထဲမတင်သောဖင်လန်ကုမ္ပဏီ၏ဒေဝါလီခံခြင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Simyo သည်မစဉ်းစားထားသော megabytes များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Simyo သည်၎င်းတို့အားနောက်သုံးလအထိသုံးစွဲရန်သင်မသုံးစွဲသောစာချုပ်ပါသောအပိုဆုကြေး megabytes များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
3mAh ဘက်ထရီနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုရှိသော GearBest ရှိ Ulefone Power 6350S ကိုကြိုတင်မှာယူပါ။
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Ulefone သည် Ulefone Power 3S ကိုအဆင့်မြင့်ဆုံးသော terminal ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး facial အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကြီးမားသော ၆,၃၅၀mAh ဘက်ထရီ၊ ကင်မရာလေးခု၊ လက်ဗွေဖတ်စနစ်နှင့်ဒေါ်လာ ၁၆၉.၉၉ တို့ကိုမူရင်းဒေါ်လာထက်သာလွန်သည်။ 6.350 ။
Xperia XA2 နှင့် XA2 Ultra တို့သည် Sony Open Device ပရိုဂရမ်ထဲသို့ဝင်သည်
Xperia XA2 နှင့် XA2 Ultra တို့သည် Sony Open Device ပရိုဂရမ်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်ရှိဆိပ်ကမ်းဝင်ပေါက်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Sony Xperia X နှင့် Xperia X Compact သည် Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည်
Android 8.0 Oreo သည် Sony Xperia X နှင့် Xperia X Compact တို့ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းနှစ်လုံးသို့အသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi Note5ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi Redmi Note5ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းဖြန့်ချိပွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android P တွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်မူလလုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်သည်
Android P တွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုချက်များကိုမှတ်သားနိုင်သောမူလလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ဂူဂဲလ်သည်လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသည့်အင်္ဂါရပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ZenFone5၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ပြီး MWC တွင်တင်ပြလိမ့်မည်
ZenFone5အကွာအဝေးကိုမတင်ပြမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Asus အကွာအဝေးအသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မည့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
Huawei P20 ၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏အဖုံးများဖြင့်ပြသခဲ့သည်
Huawei P20: ဖုန်း၏ဒီဇိုင်းကို၎င်း၏အဖုံးများဖြင့်စစ်ထုတ်သည်။ ယင်း၏အဖုံးများကြောင့်လူသိများသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia7Plus သည်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး၎င်း၏ပုံရိပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသိရှိပါ
Nokia7Plus - ဓာတ်ပုံများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။ MWC 2018 တွင်တင်ပြမည့် Nokia ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Nokia သည်စမတ်ဖုန်း ၈.၅ သန်းရောင်းချခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Nokia သည်ဖုန်း ၈.၅ သန်းရောင်းချခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရောင်းအားနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စျေးကွက်သို့ပြန်လာသည့်အချိန်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
OnePlus သည်တစ်နှစ်အတွင်းအမြတ်နှစ်ဆတိုးနိုင်သည်။ အလွန်ကောင်းသောအခိုက်အတန့်၌နေသောကုမ္ပဏီ၏ရလဒ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android Galaxy Oreo ကိုရရှိမယ့် Samsung Galaxy SXNUMX
နောက်ဆုံးပေါ်ယိုစိမ့်မှုအကြောင်းကိုလေ့လာပါ - Samsung သည်မည်သည့် Samsung ထုတ်ကုန်များကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုဤ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းလေ့လာပါ။
Mini Golf King နှင့်တစ်ခါမှမတူဖူးသောဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကိုခံစားပါ
ဒီနေ့မှာတော့ Play Store မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရွှေရောင်ဂိမ်းလေးထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mini Golf King ဂိမ်းအကြောင်းပြောနေတာပါ၊ အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးလို့ပြောစရာမလိုပါဘူး၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များကြောင့်သာမကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကစားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကး။
YouTube Go သည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ ကျော်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
YouTube Go ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ ကျော်မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ။ အခြားနိုင်ငံများရှိလူကြိုက်များသော app ၏ပေါ့ပါးသည့်ဗားရှင်းထွက်ရှိမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Qualcomm နှင့် Samsung တို့သည်သဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခုနှင့်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေသည်
Qualcomm နှင့် Samsung တို့ပူးပေါင်းမှုသဘောတူညီချက်အသစ်ကိုပိတ်လိုက် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုပိတ်ထားပြီးသောသဘောတူညီချက်အသစ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
ပထမဆုံး Android P Developer Preview ကတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
ပထမဆုံး Android P Developer Preview ကိုပြီးစီးပါပြီ။ operating system ဗားရှင်း၏ပထမအကြိမ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ASUS Zenfone5ကို MWC 2018 တွင်ပြသမည်
ASUS သည် Zenfone5ကို MWC 2018 တွင်တရားဝင်ပြသမည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်၏ WhatsApp စကားပြောဆိုမှုများကို iPhone တစ်ခုမှ Android ဖုန်းသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် iPhone မှ Android terminal သို့ခုန်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုပါက WhatsApp ၏စကားဝိုင်းများကိုဆာဗာများပေါ်တွင်သိုလှောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူအောင်မလုပ်နိုင်သော်လည်း၊
Huawei P20 သည်တရားဝင်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲရှိသည်
Huawei P20 ကိုမတ်လတွင်ပဲရစ်မြို့၌ပြုလုပ်မည့်ပွဲတစ်ခုတွင်ပြသမည်။ မတ်လတွင်ဖြစ်မည့်တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ထူးခြားချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသော Alcatel5၏ပေါက်ကြားသောစျေးနှုန်း
Alcatel5သည်လွန်ခဲ့သောအပတ်များစွာကကျင်းပခဲ့သော Las Vegas ရှိ Consumer Electronics Show တွင်တင်ဆက်မှုအပြီးတွင် buzz အမြောက်အများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ယခု၎င်း၏နောက်ဆုံးယိုစိမ့်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့သိနှင့်ပြီးဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုအတည်ပြုပေးသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
မကြာခင်မှာပဲ Instagram မှာဒီ application မှာဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်။ လအနည်းငယ်အတွင်းအက်ပလီကေးရှင်းမိတ်ဆက်ပေးမည့်အင်္ဂါရပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်စပိန်တွင်စတိုးဆိုင်သစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးအီတလီသို့ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ တံဆိပ်ခတ်ထားသည့်ဥရောပတွင်တိုးချဲ့ရန်အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola တွင် 4GB RAM Moto X6 ကိုအိန္ဒိယတွင်ရောင်းချမည်
Motorola သည်အင်အားကြီးမားသည့် Moto X4 ကိုအိန္ဒိယတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမည် ဒီထုတ်ကုန်မှာ 6GB RAM ပါရှိပြီး Android 8.0 Oreo ကိုစက်ရုံကနေကြိုတင်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကသူ့ရဲ့နိမ့် RAM နဲ့အခြားသောမျိုးကွဲ ၂ ခုနဲ့အတူတူပါပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Google Play ဖြင့်နေရာချပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်အပလီကေးရှင်းများကိုဖယ်ရှားမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ အက်ပလီကေးရှင်းမိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေသောအင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၅.၉၃ လက်မမျက်နှာပြင်၊ ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့် RAM7GB ပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Honor 5,93X ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ တန်ဖိုးရှိလား ၀ င်ငွေရှာဖွေရန်အလွန်ကောင်းသောဒီ terminal ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စျေးနှုန်း၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုထည့်သွင်းပါ။
Huawei MediaPad M5 ။ MWC တွင်တွေ့ရမည့်တက်ဘလက်ဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
Huawei သည်နောက်ထပ် MediaPad M5 ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဘာလင်ရှိ IFA တွင်တင်ဆက်ခဲ့သော MediaPad M3 ၏ဆက်ခံသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမည့်တက်ဘလက်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်။ အရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ်ငါတို့သည်သင်တို့ကို၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်!
သင်၏ Galaxy S9 သည်သင်၏မျက်နှာနှင့်မျက်ဝန်းတို့ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်မှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်
Galaxy S9 သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်မျက်နှာနှင့်မျက်ဝန်းတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။ ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S9 သည်ဥရောပသို့ SIM ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်
Samsung ၏ဂျာမန်အထောက်အပံ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည့်နောက်လာမည့် Galaxy S9 သည် dual-SIM ဗားရှင်းကိုဥရောပဈေးကွက်သို့တင်ပို့နိုင်သည်။
Huawei P20 သည်စျေးကွက်အတွင်းအရောင်အသွေးစုံလင်စွာရရှိမည်ဖြစ်သည်
စတိုးဆိုင်များသို့ ၀ င်ရောက်မည့် Huawei P20 အရောင်များကိုလေ့လာပါ။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည်မကြာမီဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာပြီ၊ မည်သည့်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အချိန်အတန်ကြာစဉ်းစားနေပါက smartwatch ကိုစတင်အသုံးပြုရန်တွက်ချက်သည့်သွေးခုန်နှုန်းကိုစွန့်ခွာရန်အချိန်တန်ပြီဆိုလျှင်ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်၎င်း၏အပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီများရှိသည့်သူများကိုဖော်ပြပေးပါမည်။ ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးစီးဆင်းမှုပုံစံက Samsung စမတ်ဖုန်းများကိုသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်သွေးလွှတ်ကြောများတွင်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုင်းတာသည့်အသုံးပြုသူစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုသည့်စနစ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Nokia7Plus သည်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို GeekBench တွင်ပြသခဲ့သည်
Nokia7Plus အား GeekBench တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး Qualcomm Snapdragon 660 ပရိုဆက်ဆာနှင့် Android Oreo စသည့်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါ
အလယ်အလတ်တန်းစားလက်ကိုင်ဖုန်း ၂ လုံးနှင့် Hisense H11 နှင့် H11 Pro တို့ကိုတွေ့ဆုံပါ
Hisense H11 နှင့် H11 Pro တို့သည်အလယ်အလတ်တန်းစား Terminal နှစ်ခုဖြစ်ပြီးကျိုးနွံသော်လည်းအားကောင်းသည့်လက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပါ ၀ င်ပါသည်။ စျေးကွက်တွင်ရနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သူတို့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Galaxy S9 တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာသည့်နေ့
Galaxy S9 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီတစ်လအလိုတွင် Samsung ဆိပ်ကမ်းအသစ်များ၏တရားဝင်ပုံရိပ်မှာယိုစိမ့်နေပြီးဖြစ်သည်။ အီဗန်ဘလက်စ်ကထပ်မံပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ပုံရိပ်
Moto E5 ၏မျိုးဆက်ဖြစ်သော Moto E4 ၏ပုံစံကိုဗွီဒီယိုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Motorola Moto E5 ကို OnLeaks မှပေးသော 3D rendering တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားကိုရည်ရွယ်သောဤ terminal ၏ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းကိုဗွီဒီယိုတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မင်းကိုပြတယ်!
Xiaomi သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Samsung ထက်ဖုန်းများပိုမိုရောင်းချပြီးဖြစ်သည်
Xiaomi သည်အိန္ဒိယရှိရောင်းအားတွင် Samsung ထက်သာလွန်သည်။ Samsung ကိုဖြုတ်ချခဲ့သည့်အာရှနိုင်ငံများရှိတရုတ်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Pay သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်စတင်ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကယူရိုသန်း ၁၀၀ ကျော်အကုန်အကျခံပြီးဖြစ်သည်
ဆမ်ဆောင်းသည်၎င်း၏မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းသည်စပိန်တွင်စတင်ရောင်းချချိန် မှစ၍ ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်ကိုမည်သို့စီမံပြီးပြီဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။
Nintendo သည်မေလတွင် Miitomo ကိုပိတ်မည်
Miitomo: Nintendo ၏ပထမဆုံး Android ဂိမ်းကိုမေလတွင်ပိတ်မည် Android အတွက်ကုမ္ပဏီဖြန့်ချိသောပထမဆုံးဂိမ်း၏ပိတ်သိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ယခုသင်သည် Amazon တွင်အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်သည်
Amazon သည် Altamira Real Estate Group မှတစ်ဆင့်အိမ်တစ်လုံး ၀ ယ်နိုင်သည့်နေရာမှ၎င်း၏နေရာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ကို Amazon တွင်ဝယ်မည်လား။
Vivo X20 Plus ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ မျက်နှာပြင်အောက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာပါသောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း
ဥရောပသမဂ္ဂသည်ယူရိုသန်း ၁၀၀၀ နီးပါးဒဏ်ငွေဖြင့် Qualcomm အားဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့သည်
2017 သည် Qualcomm မှ၎င်း၏လတ်တလောသမိုင်းကိုမေ့လျော့ချင်သောတစ်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၂၀၁၇ တစ်လျှောက်လုံးတွင် Qualcomm သည်…
Samsung Galaxy S9 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်မိတ်ဆက်မည်
တရားဝင် Galaxy S9 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင်မိတ်ဆက်ပြသခဲ့သည်။ ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Samsung Galaxy S9 သည်ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုတွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
Samsung Galaxy S9 ၏ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဖုန်း၏မျက်နှာပြင်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းမှပေါက်ကြားခဲ့သောဤဗီဒီယိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Google I / O 2018 ၏ပထမဆုံးအကြိုမြင်ကွင်းက Android P အမည်နှင့် ပတ်သက်၍ သဲလွန်စပေးသည်
Google I / O 2018 ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိုမြင်ကွင်းကိုသိထားပြီးဖြစ်သည်။ Google I / O 2018 ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိုမြင်ကွင်း - နှစ်စဉ်ဂူဂယ်လ်သတင်းများကိုတင်ပြသောဖြစ်ရပ်
Samsung ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Samsung ၏ဖောက်သည်များအပေါ်သံသယရှိမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်သံသယမျိုးကိုမဆိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အီတလီအာဏာပိုင်များနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်
ZTE ကနံပါတ် ၈ ကိုကျော်ပြီး Axon9ကိုဆက်ခံသူ Axon7ကိုကြေငြာခဲ့သည်
မကြာသေးမီကတရုတ်စျေးကွက်အတွက် ZTE Axon M ၏တင်ဆက်မှုမှာအာရှကုမ္ပဏီတခုက Axon7ကိုဆက်ခံသူမှာ Axon9ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ယခုနှစ်တွင်၎င်းသည်၎င်း၏နောင်တော်၏အောင်မြင်မှုကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Samsung သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကူးယူထားသောဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးထုတ် Antutu အစီရင်ခံစာအရ Samsung သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးပုံတူမျိုးပွားထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး Apple ကနောက်မှလိုက်သည်။
EMUI 8 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည့် Honor ဖုန်းများဖြစ်သည်
EMUI ၈ ကိုလက်ခံရရှိရန် Honor ဖုန်းများကအတည်ပြုသည်။ စိတ်ကြိုက်အလွှာ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မည့်ကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Ulefone Power3Max တွင် ၁၃၀၀၀ mAh ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိသည်
Ulefone က Power3ကိုဆက်ခံသူအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Ulefone Power3Max ဖြစ်သည်။ အားကြီးသော terminal သည်ကြီးမားသော 13.000mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်ပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
Ila X: ယူရို ၈၀ သာရှိသော Android ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ခြင်း
၁၀ ရက်ကြာ Ila X နှင့်အသုံးပြုပြီးနောက် iPhone X ၏ပုံတူကူးယူလိုသောယူရို ၈၀ သာကုန်ကျမည့် Android terminal ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်ကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။
Android 8.1 ။ ဆက်သွယ်မှုမပြုမီပွင့်လင်းသော WiFi ကွန်ယက်၏အမြန်နှုန်းကိုပြလိမ့်မည်
Android 8.1 ။ ၎င်းသည်သင့်အားပွင့်လင်းသော WiFi ကွန်ယက်အမြန်နှုန်းကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ Google operating system ဗားရှင်းအသစ်သို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S9 သည် 480p အရည်အသွေးရှိ 1080 fps နှုန်းဖြင့်ဗီဒီယိုများကိုနှေးကွေးစွာရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်
Galaxy S9 ၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲနီးလာသည်နှင့်အမျှ Samsung flagship အသစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းပေးမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များအားနည်းနည်းချင်းစီအတည်ပြုခဲ့သည်
မျက်နှာပြင်နိမ့်သောအာရုံခံကိရိယာဖြစ်သော Vivo X20 Plus ကိုပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုမနက်ဖြန်တွင်တရားဝင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
မနက်ဖြန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်၊ မျက်နှာပြင်အောက်လက်ဗွေဆင်ဆာဖြစ်သော Vivo X24 Plus ကိုပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုတရားဝင်တင်ဆက်တော့မည်။
အကယ်၍ သင်ဖန်သားပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါက Instagram သည်လည်းအသိပေးလိမ့်မည်
သင် screen ကိုမှတ်တမ်းတင်သောအခါ Instagram သည်အသုံးပြုသူအားအသိပေးလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာသို့မကြာမီရောက်ရှိလာမည့်တိုင်းတာမှုအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy J8 သည် Android 8.0 Oreo နှင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်
မကြာသေးမီက GFXBench နှင့် GeekBench တို့တွင် Samsung ထုတ်ကုန်တစ်ခုယိုစိမ့်ခဲ့ပြီး Galaxy J8 ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မှသာပျက်ကွက်လျှင် Android7Oreo နှင့်တိုးတက်လာသော J8.0 ၏ဗားရှင်းနှင့်၎င်းကိုအလယ်အလတ်တွင်နေရာချပေးမည့်အခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အကွာအဝေး။
ဖေဖော်ဝါရီလမှ စ၍ Samsung Cloud သည် third-party application များမှအချက်အလက်မိတ္တူကူးခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်
Samsung သည် Cloud Cloud အသုံးပြုသူများကိုဖေဖော်ဝါရီ ၆ ရက်မှ စတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်မည့်အပြောင်းအလဲများကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သည်။ ထို နေ့မှစ၍ third-party အက်ပလီကေးရှင်းမှအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
Pepephone မှအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်နှုန်းထားများကိုရှာဖွေပါ။ Pepephone မှယောက်ျားလေးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးတွင်ငွေစုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ငြင်းဆန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သောလက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ဖိုင်ဘာကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးခဲ့သည်။ သင်၏ Pepephone နှုန်းကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်စာချုပ်ချုပ်ရန်သင်ဘာကိုစောင့်နေသနည်း။
Nokia 10 သည်ပထမဆုံးကင်မရာ ၅ လုံးပါသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်နိုင်သည်
Nokia 10 နှင့်ပတ်သက်သောပထမဆုံးကောလာဟလများအရဖင်လန်ကုမ္ပဏီသည် Nokia Lumia5၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆင်တူသည့်ဒီဇိုင်းဖြင့်၎င်းဖုန်း၏နောက်ဖက်တွင်ကင်မရာ ၅ လုံးကိုကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
Sony သည် My Xperia ဖုန်းတည်နေရာဝန်ဆောင်မှုကိုပိတ်လိုက်သည်
My Xperia, Sony ဖုန်းတည်နေရာဝန်ဆောင်မှုပိတ်သွား ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းတည်နေရာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပိတ်ပစ်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အရောင်းရဆုံးထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု။ တရုတ်စာရင်း၌ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်းများနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
microblogging လူမှုရေးကွန်ယက်သည်နောက်ပိုင်းတွင်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ် ၀ င်စားစေသည့် tweets များ၏အချိတ်အဆက်များကိုနောင်တွင်သိမ်းဆည်းရန် function အသစ်တစ်ခုကိုစတင်စမ်းသပ်သည်။
OnePlus ခံစားခဲ့ရသည့်ကဒ်များခိုးယူခြင်းသည်သုံးစွဲသူ ၄၀,၀၀၀ ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်
OnePlus သည်နှစ်လတိုင်တိုင်ခံစားခဲ့ရပြီး ၀ ယ်သူများ၏အကြွေးဝယ်ကတ်များကိုရယူသုံးစွဲကြောင်းကြေငြာပြီးတစ်ပတ်အကြာတွင်အာရှကုမ္ပဏီကဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်သုံးစွဲသူ ဦး ရေ ၄၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 + အတွက် January Security Update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Samsung Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 + အတွက်ဇန်နဝါရီလလုံခြုံရေး update ကိုယခုအခါ download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
Galaxy S6 အတွက် Android Oreo update ကိုဖေဖော်ဝါရီလမတိုင်မီရရှိနိုင်သည်
ထပ်မံ၍ ပြောရလျှင် Samsung Galaxy S6 သည် Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၏အစစ်အမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထပ်မံပြောဆိုသည်။ နောက်ဆုံးသတင်းများအရဖေဖော်ဝါရီလမကုန်မီဖြန့်ချိမည်
WhatsApp Pay ကိုလာမည့်လတွင်အိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိမည်
WhatsApp နှင့်ငွေပေးချေခြင်းသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါသလော။ မကြာခင်မှာသင်လုပ်နိုင်ပါပြီ WhatsApp Pay ကိုလာမည့်လတွင်အိန္ဒိယသို့အိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်
Android အတွက် Google Chrome သည် DNS preloading ကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်
Android အတွက် Chrome သည် DNS preloading ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Browser သည်ပိုမိုမြန်ဆန်ရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအသစ်ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဂူဂဲလ်၏လည်ပတ်ရေးစနစ်အသစ်: Fuchsia OS ၏နောက်ခံပုံများကိုကူးယူပါ
Google နှင့် Android နှင့် Chrome OS တို့ကိုအစားထိုးနိုင်သော operating system သစ်ကို Fuchsia OS ဟုခေါ်သည်။
Project Linda ကိုစက်တင်ဘာလတွင် Razer Phone2ဖြင့်ရောက်ရှိလာနိုင်သည်
အရာအားလုံးကညွှန်ပြနေပုံရသည်။ ဒုတိယမျိုးဆက် Razer Phone2သည် Project Linda နှင့်လက်ချင်းချိတ်။ စမတ်ဖုန်းကို laptop တစ်လုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုကြီးမားသောနည်းလမ်းဖြင့်ခံစားနိုင်သည်။
Xiaomi Mi Max3ယိုစိမ့်မှုတွင်တွေ့ရသည်
ယိုစိမ့်ပြီးနောက် Xiaomi Mi Max3၏ပထမဆုံးအချက်အလက်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ ဖုန်းမှပထမဆုံးဒေတာရရှိသောဤယိုစိမ့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
WhatsApp Business ကိုယခုအခါ Play Store ၌ရနိုင်သည်
WhatsApp စီးပွားရေးကို Play စတိုးတွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ယခုရရှိနိုင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ
၎င်းသည် Samsung မှ Exynos 7872 အသစ်ဖြစ်သည်
Samsung က Exynos 7872 အသစ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည့်အလယ်အလတ်တန်းစားဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ပရိုဆက်ဆာသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပြီး Meizu M2018s သည်၎င်းကိုပထမဆုံးအကောင်အထည်ဖော်မည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
Google ၏အစီအစဉ်ကြောင့်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ browse လုပ်နိုင်သည်။ သင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာသွားလာနိုင်ရန်ကူညီရန်ကုမ္ပဏီမှတီထွင်ခဲ့သောအစီအစဉ်သစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းလိုက်သော Galaxy Note 8 ၏အထူးထုတ်ဝေမှုကို Samsung ကကြေငြာခဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားလပ်ရက်ကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည့် Galaxy Note 8 ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
Xiaomi Mi7ကို MWC 2018 တွင်ပြသနိုင်သည်
Xiaomi သည် Xiaomi Mi7ကို MWC 2018. တွင်တင်ဆက်နိုင်သည်။ ပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ကုမ္ပဏီ၏အတည်ပြုချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား MIUI 40 သို့မွမ်းမံသွားမည့် Xiaomi ဖုန်း ၄၀ ဖြစ်သည်
MIUI 40 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Xiaomi ဖုန်း ၄၀ သည်မကြာမီ MIUI9ကိုခံစားနိုင်မည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများနှင့်ဤစာရင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
သင်ဓာတ်ပုံရိုက်သောအခါ Instagram ကသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ လူမှုကွန်ယက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအမံအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဒီဇိုင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် Alcatel 3V ၏စျေးနှုန်း
Alcatel 3V သည် Las Vegas ရှိ Consumer Electronics Show (2018) တွင်ပြသခြင်းခံရသည်။ ၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ငါတို့ကိုပြောတယ်
ပထမဆုံး Moto Z3 နှင့် Moto Z3 Play ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်
ပထမဆုံးသော Moto Z3 နှင့် Moto Z3 Play တို့၏တရား ၀ င်ပုံရိပ်များကိုထုတ်ဝေရန်စတင်ပြီး ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ဖြင့်ဘေးထွက်အနားမရှိသည့် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်ဖြင့်စျေးကွက်သို့ဝင်မည့်ဆိပ်ကမ်းများစတင်မိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Honor 8 ကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်မဟုတ်ပါ
Android Honor 8 မွာ Honor XNUMX ထွက်ရှိလာပြီ သင့်ဖုန်းကိုမွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အကြောင်းရင်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy S9 ကိုမတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ရယူနိုင်ပါတယ်
Galaxy S9 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီတစ်လအလိုတွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်ဤမော်ဒယ်သစ်ကိုအမြန်ဆုံးဖြန့်ချိလိုသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Motorola ကတ်တလောက် ၂၀၁၈ ကိုစစ်ထုတ်ထားသည်
ယခုနှစ်ပထမ ဦး ဆုံးသတင်းအနုပညာသတင်း, Motorola မှတစ်စုံတစ် ဦး သည်ယခုနှစ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစာရင်းအားလုံးကိုပေါက်ကြားစေခဲ့သည်
Galaxy J7 Prime နှင့် Galaxy Tab E ကို Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
Samsung Galaxy J7 Prime နှင့် Galaxy Tab E terminal များကို Android 8.0 Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဟုအော်ပရေတာ T-Mobile မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
iLA X ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ယခုတွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီ
အကယ်၍ သင်ဟာ iPhone X Clone ကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာပိုက်ဆံအများကြီးမဖြုန်းချင်ဘူးဆိုရင်သင်ရှာနေသောကိရိယာဟာ iLA X ဖြစ်နိုင်တယ်။
HTC U11 EYE များကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသင်ပြောပြပါလိမ့်မည်
HTC U11 EYEs များကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်စွမ်းအားပြည့် mid-range terminal ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးရှိပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Xiaomi သည် Android Oreo update ကို Mi A1 အတွက်ထပ်မံပြုလုပ်သည်
Xiaomi သည် Android Areo update ကို Mi A1 တွင်ပြသထားသောပြfixနာများကိုဖြေရှင်းရန်အလျင်အမြန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအမှားအယွင်းများအားလုံးနှင့်အတူ update အသစ်ကိုယခုရရှိနိုင်သည်။
ပထမဆုံး Moto E5 ပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာ
Motorola / Lenovo Moto E5 ကိုပထမဆုံးပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ပုံမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလက္ခဏာများရှိသည်
Samsung Galaxy A8 (2018) ကိုစပိန်တွင်ရောင်းပြီးဖြစ်သည်
Samsung Galaxy A8 (2018) ကိုစပိန်နိုင်ငံရှိတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ Movistar နှင့် Vodafone တို့တွင်ယူရို ၄၉၉ နှင့် ၄၉၉.၉၉ အသီးသီးဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Arirang 151၊ မြောက်ကိုရီးယား Android
မြောက်ကိုးရီးယားတွင်သူတို့၏အာဏာရှင်ဆန်မှုနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒတို့ရှိသော်လည်းစမတ်ဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သကဲ့သို့များသောအားဖြင့်လည်းနှစ်သက်ကြသည်။ Arirang 151 ရှိသည့် Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မျှမျှတတကျိုးနွံသောအခြေခံသတ်မှတ်ချက်များရှိသော်လည်းအလွန်အသုံးဝင်သည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
ကြော်ငြာကိုကျော်လွန်ရန် YouTube သည် incognito mode၊ အမှောင်စနစ်နှင့်အမူအရာအသစ်များကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
နှစ်များတစ်လျှောက် YouTube သည်မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆိုရှာနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသော platform ဖြစ်လာသည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge browser ကို Android Oreo အတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်သတင်းများဖြင့် update လုပ်သည်
Microsoft Edge သည် Android Oreo အတွက်သိမ်မွေ့သော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှဤအက်ပ်အတွက်ဒီအက်ပ်၏ဗားရှင်း၏ Adaptatives Icons နှင့်စာဖတ်ခြင်းတိုးတက်မှုတို့ဖြစ်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
Xiaomi သည် Xiaomi Mi A1 ၏ Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်
Xiaomi သည် Xiaomi Mi A1 ၏ Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြproblemsနာများစွာ၏နောက်ကွယ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy S9 box သည်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အံ့အားသင့်စရာများစွာဖြင့်ပေါက်ကြားသည်
နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy S9 ၏ပုံရိပ်ထွက်ပေါ်လာသည့်အချက်အလက်များအရ AKG မှထုတ်လုပ်သောစပီကာများနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းတွင်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသည့်အဖွင့်အပိတ်ကိုကင်မရာကမြင်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များသည် HTC ၏တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးဌာန၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရရှိပြီးနောက်တွင်၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများ၏အထူကိုလျှော့ချရန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစပီကာများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။
OnePlus သည် United States တွင်ဆင်းသက်လိုပြီးအဆက်အသွယ်များနှင့်စတင်ခဲ့သည်
Xiaomi Redmi Note 5A သည်တစ်လလျှင်ယူနစ် ၁ သန်းကျော်ရောင်းချရသည်
Xiaomi Redmi Note 5A သည်တစ်လလျှင်တစ်သန်းကျော်ရောင်းချသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အနိမ့်ဆုံးအရောင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
GPS စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်လှည့်ကွက် ၄ ခု။ သင်၏ GPS ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာတိကျမှန်ကန်စွာလည်ပတ်စေနိုင်သည့်ဤရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။
HMD သည် Asha ၏အခွင့်အရေးကိုရရှိသည်
HMD သည် Asha စီးရီးရှိ Nokia ထုတ်ကုန်များအားလုံး၏အခွင့်အရေးကိုယခင်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော Microsoft မှပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤဖင်လန်ကုမ္ပဏီသည်ဤနိမ့်ကျသောအဖွဲ့များကိုစျေးကွက်တင်ရန်တာဝန်ယူလိမ့်မည်။ ငါတို့ကိုပြောမယ်
အခုတော့ဟုတ်တယ်၊ Android Oreo ကို OnePlus5အတွက်ရပြီ
OnePlus ထုတ်လုပ်သူသည် OnePlus5terminal များအတွက် Android Oreo အသစ် update အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်သည်၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကဖြန့်ချိခဲ့သော version ထက်များစွာတည်ငြိမ်သော version ဖြစ်သည်။
Huawei Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro တို့ကိုဖေဖေါ်ဝါရီလမှ Microsoft Store တွင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်
Huawei သည် Mate 10 နှင့် Mate 10 Pro terminal များကိုကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချရန် Microsoft နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားရှိ Redmond အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
HTC U11 မျက်လုံးများ - အလယ်အလတ်တန်းစားသစ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်ရုပ်ပုံများ။ ဒီတနင်္လာနေ့တွင်ပြသထားသည့်ထိုင်ဝမ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Maze Alpha 4G နှင့်ကြယ်တံခွန်များကို GearBest နှင့် Ebay တို့တွင်ရောင်းချသည်။ ဒီအလယ်အလတ်တန်းစားပစ္စည်းတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းမှာပါ။ အခွင့်ကောင်းယူသည်!
IP2 လက်မှတ်ပါ ၀ င်သည့်အားကောင်းသော Ulefone Armor 68S ကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Ulefone Armor 2S ကို Aliexpress မှတရားဝင်ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ဤပစ္စည်းသည်ခြစ်ရာများ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရေနှင့်အခြားအလွဲသုံးစားမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေသော IP199.99 လက်မှတ်နှင့်အတူပါရှိသည်။ ငါတို့ကိုမင်းကိုပြတယ်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ LG က၎င်းသည်နှစ်စဉ်ဖုန်းများကိုနှစ်စဉ်ရောင်းချခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးရန်မမျှော်လင့်ပါ။
Nokia 8 သည် DxOMark တွင်အဆိုးဆုံးရမှတ်တစ်ခုရရှိသည်
Nokia 8 ၏ကင်မရာသည် DxOMark တွင်ညံ့ဖျင်းသည်။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ဤမကောင်းတဲ့ရမှတ်၏မူလအစအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Aliexpress တွင် ၄၉ GB RAM Vernee X ကို 4GB ROM ဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ ဖြင့်ဝယ်ပါ
Vernee X 4GB + 64GB ကို Aliexpress တွင်ဒေါ်လာ ၁၉၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ဒီ Terminal မှာအလယ်အလတ်တန်းစားရဲ့ပုံမှန်လက္ခဏာများရှိပါတယ်။
Vernee Apollo2ကိုဖေဖော်ဝါရီလတွင် Mobile World Congress သို့ရောက်ရှိမည်
မကြာသေးမီက Vernee သည်သူမ၏တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် Apollo2ဒီဇိုင်းကိုတင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် Apollo ကိုဆက်ခံသူဖြစ်လာနိုင်သည့်ဤ terminal သည်လုံးဝတိုးတက်သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဒီဇိုင်းများဖြင့်လာလိမ့်မည်။
Huawei Mate 10 Porsche ဒီဇိုင်း၏နောက်ခံပုံများကိုကူးယူပါ
သင်သည် Huawei Mate 10 Pro Porsche Edition ကို ၀ ယ်ရန်မရည်ရွယ်ပါကဤဆောင်းပါးတွင်သီးခြားနံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်နံရံကပ်ရောင်ခြည် ၈၂ လုံးကိုသင်၏ပစ္စည်းတွင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။